Wallabag: ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသိမ်းရန်အရင်းအမြစ်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်သည့်အပလီကေးရှင်း | Linux မှ
Wallabag - ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသိမ်းရန်အရင်းအမြစ်ဖွင့်လှစ်သောကိုယ်ပိုင် hosting application
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကaအကြောင်းပြောကြမယ် open source app အသုံးပြုခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည် အက်ပ်များကိုဖတ်သည် Instapaper, Pocket, Memex နှင့် Polar အစရှိသောစီးပွားဖြစ်၊ တံခါးပိတ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသို့မဟုတ်အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒီဟာက ဝေါလာအိတ်တစ်ဦး Self-hosting PHP application.
ထို့ကြောင့် ဝေါလာအိတ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ဆာဗာတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အထက်ပါအပလီကေးရှင်းများနှင့်ဆင်တူသည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ လိုချင်သောဝဘ်စာမျက်နှာများ၏စာသားများကိုဖမ်းယူသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဖတ်ရှုခြင်းအတွက်၊
ငါတို့ပထမဆုံးအကြိမ်ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ ဝေါလာအိတ် ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်4လွန်ခဲ့တဲ့ XNUMX နှစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ပို့စ်တွင်ခေါ်ခဲ့သည် "Wallabag ကို VPS ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်း"ဤပြီးပါကပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
VPS တွင် Wallabag တပ်ဆင်ခြင်း
1 Wallabag - ကိုယ်ပိုင် hosting အတွက် PHP application တစ်ခု
Wallabag - ကိုယ်ပိုင် hosting အတွက် PHP application တစ်ခု
သင့်ရဲ့အဆိုအရ GitHub တွင်တရားဝင်ဆိုဒ် ၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုသိမ်းဆည်းရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင် hosting တစ်ခု။ ဆောင်းပါးများကိုသိမ်းခြင်းနှင့်ခွဲခြားခြင်း။ နောက်မှဖတ်ပါ။ အားလုံးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အတူ".
နေစဉ်, သူ့၌တည်၏ ကိုယ်ပိုင်တရားဝင် site ကို ၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"သင်၏ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင်မှကျေးဇူးတင်စကားသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်သုံးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် Wallabag ကိုနေရာတိုင်းသယ်ယူပြီးအသုံးပြုနိုင်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုအလုပ်မှာလက်ပ်တော့ပ်ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းပြီးမြေအောက်ရထားပေါ်ရှိသင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်စတင်ဖတ်ရှုပြီးအိပ်ယာပေါ်၌သင်၏လက်တော့ပ်ပေါ်တွင်စာဖတ်နိုင်သည်။".
ထိုမင်း၌ရှိ၏ Android ပေါ်ရှိ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များ ၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"စာဖတ်ပြီးနောက် app တစ်ခု။ အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဆောင်းပါးများကိုအဆင်ပြေစွာဖတ်ရှုနိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသည်။ သင်သည် wallabag.org တွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာတွင်ထည့်သွင်းရန်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာနိုင်သည်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ် wallabag.it တွင်တိုက်ရိုက်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ဤ android application သည်သင်၏ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုရန်နှင့်စီမံရန်ခွင့်ပြုပြီး wallabag server နှင့်အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုနိုင်သည်".
ဝေါလာအိတ် ၎င်းကိုဖန်တီးပြီးကတည်းကမကြာခဏမွမ်းမံခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်လက်ရှိတွင်၎င်း၏ထင်ရှားသောလက္ခဏာများမှာ -
အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများ၌တင်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်အိတ်ဆောင်၊ ဖတ်လို့ရတဲ့၊ Instapaper၊
လက်တွေ့ကျပြီးရိုးရှင်းသော API ကိုပေးထားသည်ဖြေ။ ။ developer တွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် app တွေကိုသူတို့ရဲ့ Wallabag နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်။
RSS စာဖတ်သူ / feed aggregator များစွာကိုထောက်ပံ့သည်Miniflux၊ ဗီယင်နာ RSS၊ FreshRSS၊ Tiny Tiny RSS, Leed, Feed Reader နှင့် Fiery Feeds တို့ပါဝင်သည်။
ထိုအချက်ကိုသတိပြုသင့်သည် ဝေါလာအိတ်၎င်းသည်လည်းထောက်ပံ့ထားသော application တစ်ခုဖြစ်သည် Yunohost, အောက်ပါအတွက်အတည်ပြုနိုင်ပါသည်သော link ကို။ သင်မသိလျှင် Yunohostဤစာစောင်၏အဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏စာပေကိုဖတ်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ချစ်သူ တိုက်ရိုက်ဖြစ်နိုင်သည့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုဆက်ကပ် 14 ရက်အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေး မည်သည့်ကန့်သတ်မရှိဘဲ။
FreedomBox, YunoHost နှင့် Plex: စူးစမ်းလေ့လာရန်အကောင်းဆုံး3ပလက်ဖောင်းများ
၎င်း၏တပ်ဆင်တကယ်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်၎င်း၏ စာရွက်စာတမ်းများ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်ပြီးနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်၊ ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုစပိန်ဘာသာသို့သာပြန်ဆိုထားခြင်းမရှိပါ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်နှင့်အီတလီ။ တပ်ဆင်မှုပြုလုပ်ရန်အောက်ပါတွင်ဖော်ပြထားသောရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ link ကို.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" Self-hosting PHP application အကြောင်းပါ «Wallabag», များစွာသောအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအကောင်းဆုံး open source ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် အိတ်၎င်းသည်စာဖတ်ခြင်း (သို့) ဆောင်းပါးများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာတွင်သိုလှောင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းအရာအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Wallabag - ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသိမ်းရန်အရင်းအမြစ်ဖွင့်လှစ်သောကိုယ်ပိုင် hosting application
Google သည် IETF QUIC နှင့် HTTP /3ကို Chrome တွင်စတင်ပြီးဖြစ်သည်